Lucas Ocampos oo ka hadlay kusoo biiristiisa AC Milan + Sawirro – Gool FM
(Milano) 30 Jan 2017 – Laacibka Lucas Ocampos ayaa caafimaadka ku maraya la clinica La Madonnina oo ku yaalla magaalada Milano isagoo leh: ”Waan ku faraxsan ahay inaan halkan imaaddo waana dadaadi doonaa.”
Garab-weerarka Genoa ayaa caafimaadka u maraya AC Milan oo uu qaab amaah ah ugu yimi iyagoo nus milyan siinaya Genoa, isagoo sida uu qorayo La Gazzetta dello Sport amaah qallalan kula joogi doona muddo 5 bilood ah.
Farsamo ahaan laacibkan waxaa weli iska leh Olympique Marseille, kuwaasoo sidoo kale 25% ku leh lacag kasta oo mustaqbalka lagu iibiyo, balse weli dookha iibsiga laacibka waxaa iska leh Genoa oo uu amaah kula joogay.
Sidaa darteed, haddii ay Milan ciyaartiisa ku qanacdo waxaa khasab noqon doonta in Milan iyo Genoa ay ku heshiiyaan halka uu ka ciyaari doono fasalka xiga.
Arsene Wenger oo durba ka hadlay wararka Arsenal la xiriirinaya Karim Benzema